पाँच करोड लगानीमा अब सुकुटेमा कृषि पर्यटन लक्षित रिसोर्ट - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ पाँच करोड लगानीमा अब सुकुटेमा कृषि पर्यटन लक्षित रिसोर्ट
Sindhu Khabar बुधबार, २०७८ भदौ २३ / ११:०३
सुकुटे । के तपाईं काठमाण्डौंको होहल्लाबाट एक दिन भएपनि शान्त वातावरण खोज्दै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेस्थित कुनै रिसोर्ट पुग्नु भएको छ ?
अनि के तपाईंले खोजेजस्तै, सोचेजस्तै शान्त र आरामदायी रिसोर्ट पाउनुभयो ?
रिसोर्ट छेऊकै बारीम उत्पादन भएका अर्गानिक तरकारीको स्वाद चाख्न पाउनुभयो ?
अझै इच्छा लाग्दा छुट्टै किचन अनि आफ्नै साथी भाई तथा परिवारसँगै बसेर रमाउृँदै आफैले पकाउँदै खान पाउनुभयो?
हुनसक्छ, तपाई सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे क्षेत्र पुग्नुसभएको भए यी सबै एकै ठाउँमा सम्भव भएन होला ।
तर, अब सम्भव हुँदैछ ।
होटल व्यवसायी विनायक शाहले अहिले कृषि पर्यटनमा आधारित होटल खोल्न लागि परेका छन् । र, तयारी धमाधम भइरहेको छ ।
‘यो महामारी र नयाँ पुस्ता फरक किसिमले रमाउने हुँदा यष्स्तो वातावरणको कमी भएके महसुस गर्दै नयाँ तरिकाले खोल्नुपर्छ भन्ने सोचेर कृषि पर्यटनमा आधारित होटल खोल्न लागेको हुँ,’ होटल व्यवसायी तथा होटल संघ (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका शाहले भने ।
शाह होटलमा लगानी गरिरहने व्यवसायी हुन् । बाणिज्य मन्त्रालयमा रहेृको जागिर छाडेर उनी होटल व्यवसायमा होमिए । २०५० सालबाट होटल व्यवसाय सुरु गरेका शाह अहिले यही पेशामा रमाएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर उनको एकल लगानीमा ६२ कोठाको ’एयरपोर्ट’ होटल सञ्चालित छ। अन्य मुख्य सहरमा भने साझेदारीमा होटलमा लगानी गरेका छन्। बर्खापछि होटलको काम सुरू गर्ने पनि उनले बताए।
उनले होटल सञ्चालनका लागि बिएम एग्रो टुरिजम कम्पनी पनि दर्ता गरेका छन्। होटलको नाम पनि बिएम एग्रो टुरिजम रहने छ। ‘कृषि पर्यटनलाई बढावा दिने मेरो योजना हो,’ उनी भन्छन्, ‘फ्रेस खानेकुराको स्वाद पाइओस् भनेर ग्राहकहरु यहाँ आउनेछन् भन्ने विश्वास छ ।’
ग्राहकले यहाँ कृषि पर्यटनमा आधारित होटलमा आवास सुविधासहित तरकारी, फलफूल र बालीनाली पनि हुनेछ। पर्यटकहरूले यहीँ उब्जेका कृषिजन्य वस्तु उपभोग गर्न पाउनेछन्।
योजना अनुसार यहाँ कटेजहरू बनाइनेछ । रिसोर्ट सुन्दर देखिनका लागि फूलहरु रोप्ने काम भइरहेको छ । पकेट–पकेट बनाएर तरकारी खेती र कुनाकाप्चातिर फलफूलका बोट रोपिनेछ। त्यस्तै गाई तथा कखुरा पालन गर्ने पनि तयारी छ।
’म पाँच परिवारका लागि पाँच वटा कटेज बनाउँछु। त्यो भन्दाबढी ग्राहक आए भने स्थानीयका होमस्टेमा बस्न सक्छन्,’ उनले भने, ’फार्ममा उपलब्ध नभएका तरकारी पनि हामी स्थानीयसँग नै किन्छौं।’ उनले स्थानीयलाई अर्थतन्त्रमा अब्बल बनाउन होमस्टेको अवधारण पनि ल्याएका छन् । ‘व्यवसाय मेरो मत्रै चलेर हुन्न यहाँका स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।’ उनले योजना सुनाए । हाल काम सुरू नभइसकेकाले उनले जग्गामा अचार खाने स्थानीय जातको तिल लगाएका छन्।
अहिले यो होटलका लागि जग्गा समेत गरेर करिब पाँच करोड लगानी अनुमान गरेका छन् उनले।
यहाँ पहिलो चरणमा केही मिटरको दुरीमा पाँच वटा कटेज बन्नेछन्। हरेक कटेजमा एउटा भान्सा, दुइटा बेड रूम र एउटा लिभिङ रूम हुनेछ। आफैं पकाएर खान चाहने ग्राहकका लागि भान्सा व्यवस्था गरिएको शाहले जानकारी दिए। नभए होटलको आफ्नै रेस्टुरेन्ट पनि हुनेछ।
शाहले होटल खोलेर नाफा कमाउने भन्दा पनि स्थानीय खाना प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको बताए। यसबाहेक ग्राहकका लागि इन्द्रावतीमा ¥याफ्टिङ, हाइकिङ, स्थानीय नाचगान लगायत कार्यक्रम राखिनेछन्।
मेलम्ची खानेपानीको अध्ययन गर्न एडीबीको टोली आउने